के छ संसदमा सभामुखले एमालेलाई सम्झाईरहेको धारा १ सय ५ मा ? « Sansar News
के छ संसदमा सभामुखले एमालेलाई सम्झाईरहेको धारा १ सय ५ मा ?
२५ भाद्र २०७८, शुक्रबार १४:०३
भदौ २५, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले संसद अधिवेशन शुरुको दिनदेखि नै अवरोध गरिरहेको छ । एमालेले प्रतिनिधि सभाका सभामुखविरुद्व नै नाराबाजी गरिरहेको छ ।
शुक्रबार पनि बैठक शुरु हुनासाथ एमालेका सांसदहरुले उठेर नाराबाजी शुरु गरेका थिए । एमालेको निरन्तर नाराबाजीका बीच शुक्रबार १५ मिनेटका लागि संसद बैठक स्थगित पनि भएको थियो । अहिले एकातिर एमालेको नाराबाजी कायमै छ भने अर्कोतिर संसद बैठकलाई सभामुख सापकोटाले अगाडि बढाएका छन् ।
सभामुख सापकोटाले निरन्तर एमालेका सांसदहरुलाई संसदीय मर्यादालाई हेक्का राख्न सुझाइरहेका छन्। उनले यसअघि जस्तै संविधानको धारा १ सय ५ को स्मरण गर्न एमोललाई आग्रह गरेका छन् भने प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम २१ लाई पालना गर्न सुझाएका छन् ।
के छ संविधानको धारा १ सय ५ मा ?
एमालेले निरन्तर माधवकुमार नेपालसहित तत्कालिन समय कारबाही गरिएका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गरिरहेको छ । एमालेले १४ सांसद संसदमा रहुन्जेल संसद चल्न नदिने अडान राखेको छ ।
एमालेले उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि दायर गरेको छ । सभामुख सापकोटाले पटक–पटक हेक्का राख्न आग्रह गरेको संविधानको धारा १ सय ५ मा अदालतमा विचाराधिन मुद्दाका विषयमा सदनमा छलफल गर्न नपाईने उल्लेख छ । जसलाई सभामुखले जोड दिईरहेका छन् ।
धारा १ सय ५ मा स्पष्ट भनिएको छ – नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर गर्ने विषय तथा न्यायाधीशिले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन् ।
तर एमालेले आफैंले मुद्दा दायर गरेको विषयमा संसदभित्र हंगामा मच्चाईरहेको छ । सामान्य रुपमा हेर्दा संसदीय मर्यादाभन्दा बाहिरको भूमिका एमालेले देखाईरहेको देखिन्छ ।